မြန်မာ ယူနီကုဒ် သုံးချင်လာလို့ အိုင်ဖုန်းထဲဘယ်လို ထည့်ရမလဲ ?
By Htet Wai Aung - September 25, 2016
Myfont ဆိုတဲ့ apps ထဲကနေ နှစ်မျိုးမြင်ဖေါင့် ဖြစ်တဲ့ hybrid font ဖြစ်ဖြစ် Unicode font ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုထည့်လိုက်ရင် ယူနီကုတ်နဲ့ရေးထားတာတွေမြင်လာရပါမယ် ဒါပေမယ့် ဇော်ဂျီစာတွေတော့ ယူနီကုဒ်ထည့်လိုက်ရင် ဖတ်မရတော့ပါဘူး၊ ၂ မျိုးမြင် hybrid font ထည့်သုံးရင်တော့ ၂ ခုစလုံးဖတ်လို့ရသွားမယ် ဒါပေမယ့် ဇော်ဂျီနှင့် ရေးထားတာတွေကတော့ ၈၀% နှုန်းဘဲအတည့်မြင်ပါမယ် (ဆိုတာက သဝေထိုးရှေ့နောက်နေရာလွဲတာတို့ ယပင့် ရရစ်တွေလွဲပါတယ်)
ယူနီကုဒ်ဖေါင့်/ ၂ မျိုးမြင် hybrid font ထည့်လိုက်ပီးရင်တော့
ယူနီစာတွေဘဲ အတည့်ပေါ်ပါမယ် (hybrid font ဆို ဇော်ဂျီ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းဘဲ အတည့်မြင်ပါမယ်) ဆိုတော့ ရေးတဲ့ကီးဘုတ်ကလဲ
ယူနီကုဒ်ပုံစံစာစီထားတာတွေ ထွက်လာမှ အတည့်ပေါ်ပါမယ်
စာပို့စာယူဆိုလဲ တစ်ဖက်က လက္ခံတဲ့စက်က ယူနီကုဒ်ဖေါင့်ထည့်ထားမှ ယူနီကုဒ်ကီးဘုတ်နဲ့ ရိုက်ပို့လာတဲ့စာတွေကို မြန်မာလို အတည့်မြင်ရပါမယ်၊
အိုင်ဖုန်းမှာ ယူနီစာစီစနစ်တွေရေးဖို့ရာ တီတီကီးဘုတ်ထဲမှာပါဝင်လာပီးသားပါ၊ ဇော်ဂျီဖေါင့်တစ်ခုဘဲ ဖုန်းထဲထည့်ထားရင်တော့
ယူနီကီးဘုတ်နဲ့ရိုက်ရင်/ ရိုက်ထားတဲ့စာတွေ အတည့်မမြင်/ဖတ်မရပါဘူး၊ အိုင်ဖုန်းမှာ ယူနီကီးဘုတ်အလုပ်လုပ်ဖို့ရာ စတိုးကနေ တီတီကီးဘုတ် apps ထည့်ပီးရင် အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးရင်ရပါပီ
စာရိုက်ရတာ အတူတူဘဲလား တီတီယူနီကီးဘုတ်မှာ ယခင်ထက် စာရိုက်ရအနည်းငယ်ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်
ငယ်ငယ်က သတ်ပုံအတိုင်းရေးရတဲ့ စာရေးစနစ်ကို မှတ်မိရင်တော့မခက်ပါဘူး ဥပမာ မြို့ကိုရိုက်ချင်ရင် မ ရရစ် လုံးကြီးတင် တစ်ချောင်ငင် အောက်ကမြင့် စသည့် အစီအစဉ်အတိုင်းရိုက်ရပါလိမ့်မယ်၊
(MyanSan keyboard not UniZG😅)
MyFont - Myanmar Font by Hein thet Khin zaw
ttKeyboard by Hein thet Khin zaw
Settings>> General >> Profile ကနေ သက်ဆိုင်ရာဖေါင့် profile ထဲဝင်ပီး ဖျက်ပေးလို့ရမှာပါ
Settings >> General >> Keyboard >> Keyboards >> ဖျက်လိုတဲ့ ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ ဗယ်ကနေညာဘက် ပွတ်ဆွဲပီး ဖျက်ပေးရုံပါဘဲ၊
iOS 10 မှာ မြန်မာစာထည့်ပေးဖို့လိုအုန်းမလာ?
iOS 10 မှာ မြန်မာစာ အပြည့်ပါဝင်လာလို ယခင်လို ထည့်သွင်းစရာမလိုတော့ပါဘူး၊
မကြိုက်လို့ ဖျက်လို့ရောရသေးလား ?
ရပါတယ် Facebook ကို စတိုးမှ Likebook ဆိုတဲ့ apps နှင့်ဖြစ်စေ
Safari ထဲကနေဆို Zawgyi force ကို အသုံးပြုပီး အသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်
နောက်ထွက်မယ့် iOS တွေမှာ မြန်မာယူနီကုဒ် မပါလာဖို့ရာရှိပါသလား?
မရှိပါသေးပါ ယူနီကုဒ်စနစ်က လက်ရှိကမ္ဘာသုံး စံစနစ်ဖြစ်နေလို့ အခြားဘာသာစာပေ စာလုံးများနည်းတူ ရှေ့ရှောက်လဲ ပါလာပါလိမ့်အုန်းမယ်
iOS Keyboard Tutorial ဆောင်းပါး
Bo Bo Keyboard
Unicode Vs iOS 10
iOS 10 မှာ မြန်မာစာ မှန်ပီလား ?
Unicode ဆိုတာ ဘာလဲ
အကယ်၍ သူ့မှာသာ အသက်ရှိခဲ့ရင်ပေါ့
ယူနီကုတ် မသုံးဘဲနေတာကြာရင် ပိန်းတက်ပါသလားတဲ့?
မြန်မာစာသည် တို့စာ မြန်မာစကားသည်တို့စကား
မြန်မာ ယူနီကုဒ် သုံးချင်လာလို့ အိုင်ဖုန်းထဲဘယ်လို ...
Unicode or Zawgyi Hybrid?
Online Typing Tutor for Myanmar Unicode
iOs post collection
NZ Physical keyboard for android by ကျော်သက်ထက်ဇော်
Myanmar Katkuu font By Khon Soe Zaw Thu
Myanmar Unicode Fonts ( 19 )For iPhone Free Downlo...
Convert mp3 tag (Zawgyi to Unicode)
Huawei Unicode theme fonts
Vivo Myanmar Unicode theme font for Android 4.2.2